LG G8 ThinQ ၏ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်း | Androidsis
LG G8 ThinQ ၏ဒီဇိုင်းကို၎င်း၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါသလား။
ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကိုပြသဖို့ကျန်နေသေးသည်။ ဒါဟာမင်းတို့နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူး LG G8 ThinQ ၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ယခုဤမျှော်လင့်ထားသည့် device သည်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် MWC 24 ၏မူဘောင်အတွင်းကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှစီစဉ်ထားသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်နေ့၏အလင်းရောင်ကိုမြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။ LG G8 ThinQ ၏ဒီဇိုင်းသည်လက်တွေ့ကျပြီးဖြစ်သည်။
အစပိုင်းတွင်ရေတစ်စက်ပုံစံဖြင့်မျောပါလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသော်လည်း၎င်းမျဉ်းကြောင်းများကိုခေါင်းပုံဖြတ်ထားသည့်ပုံတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည် LG G8 ThinQ ဒီဇိုင်း ဒီဒြပ်စင်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အကြောင်းရင်း? အဆိုပါ notch ပိုကြီးလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သူက device ကိုအမှန်တကယ်စပ်စုအသုံးပြုမှုကိုပေးစေခြင်းငှါအသစ်သောအာရုံခံကိရိယာများပါဝင်သည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
LG G8 သည် On-Screen Sound နည်းပညာဖြင့်စျေးကွက်သို့ကျရောက်နိုင်သည်
LG ၏ကြေငြာချက်အရ LG ၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည် Mobile World Congress တွင် 2019ဆိုးလ်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူသည် LG G8 ThinQ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် notch ၏အရွယ်အစားကိုတွေ့မြင်ရလျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ထိရန်မလိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် gesture များမှတဆင့် device ကိုသေချာထိန်းချုပ်နိုင်သည်မှာထင်ရှားသည်။
၎င်းသည် LG G8 ThinQ ၏ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကြီးမားသောထုထည်ရှိသည်
ဒီပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း XDA ယောက်ျားတွေကပေါက်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ notch မှာမတူညီတဲ့အာရုံခံကိရိယာတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်တယ်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့ဘက်ကင်မရာရှိသည်၊ ယုတ္တိရှိပြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အရာတစ်ခုရှိသည်၊ သို့သော်အခြားအာရုံခံကိရိယာများသည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။
တဖကျတှငျကရှင်းပါတယ် LG G8 ThinQ ဒီဇိုင်း နောက်ဘက်တွင်လက်ဗွေဖတ်စက်ပါရှိသည်။ အထူးသဖြင့် Samsung Galaxy S10 မှာ biometric sensor ပါဝင်မယ်။ ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကြီးကဒီအစိတ်အပိုင်းကိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုတာကိုသိရင် Samsung ဖုန်းဟာအားသာချက်တစ်ခုနဲ့အတူထွက်ခွာသွားပြီဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် LG G8 ThinQ မှာ LG GXNUMX မှာရှိမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ် တကယ်စွမ်းအားကောင်းတယ်၊ ဒါကလက်ဗွေဖတ်တဲ့သူမပါဘဲလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆိုးလ်မြို့အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းခွင်မြင်း၏ရှေ့ဘက်တွင်ပါ ၀ င်သောကျန်အာရုံခံကိရိယာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်။
LG G8 ThinQ ၏အမူအယာစနစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ဤထူးခြားသောဗီဒီယိုနှင့်၎င်း၏အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမည်ကဲ့သို့ကြေညာခဲ့သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၎င်းသည်အတော်အတန်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိအခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၎င်းသည်အတော်လေးတိုးတက်မှုဖြစ်ရမည် LG သည်တယ်လီဖုန်းဌာန၏မကောင်းသောရလဒ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ရည်ရွယ်သည်လက်ရှိ doldrums ၌တည်ရှိ၏။
ကံမကောင်းစွာပဲ LG G8 ThinQ ရဲ့ကျန်တဲ့ဒီဇိုင်းကဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူး။ အစပိုင်းမှာတော့ high-end terminals တွေမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ tempered glass and steel နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ နောက်ကျောတွင်လက်ဗွေဖတ်စနစ်ရှိခြင်းအပြင်အခြားစိတ်ပျက်စရာတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရသည်။ စက်၏ကင်မရာသည် dual-lens system ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက ပို၍ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ LG GV40 တွင်သုံးဆကင်မရာစနစ်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏တကယ့်ကိုထူးဆန်းသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သို့မည်ပုံကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည် LG G8 ThinQ ကင်မရာ သူမ၏ဝေဖန်မီ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင် terminal မှာ on and off key အပြင် device မှာသမားရိုးကျ volume control ခလုပ်တွေရှိတယ်။ ထိုစတုတ္ထခလုတ်? ယခင်မော်ဒယ်များ၌ရှိသကဲ့သို့, LG G8 ThinQ ဒီဇိုင်း ၎င်းတွင်ဂူဂဲလ်အသံလက်ထောက်ကိုသက်ဝင်စေမည့်အထူးခလုတ်တစ်ခုပါလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်ဖုန်းကိုတို့ထိစရာမလိုဘဲအချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်နှင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G8 ThinQ ၏ဒီဇိုင်းကို၎င်း၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါသလား။
Google I / O 2019 မှာအတည်ပြုပြီးတဲ့နေ့စွဲပါ
ယခုအခါ Apple Music အက်ပလီကေးရှင်းသည် Android tablet များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်